Police INTERPOL ရှေ့မှောက်က ၀ရမ်းပြေးအောင်ဝင်းခိုင် လွတ်မြောက်နေဦးမည်လော? - News @ M-Media
Police INTERPOL ရှေ့မှောက်က ၀ရမ်းပြေးအောင်ဝင်းခိုင် လွတ်မြောက်နေဦးမည်လော?
in ဆောင်းပါး — April 23, 2017
ဇန်န၀ါရီ-29-2019 ရက်နေ့ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်ကွင်းရှေ့တွင် ဆရာဦးကိုနီအားလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွင် ကြီးကြပ်ကြိုးကိုင်ခဲ့သော တရားခံပြေး အောင်ဝင်းခံအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ နေပြည်တော်အပါအ၀င် မြန်မာပြည်အနံ့ လိုက်လံစုံစမ်းလျှက်ရှိသလို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲအဖွဲ့ Police INTERPOL ကိုလည်း အကြောင်းကြားထားကြောင်း ရဲချုပ်ဇော်ဝင်းမှ ဧပြီ(၁၀)ရက်က နေပြည်တော်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (ဗီဒီယို ကိုးကား။ Central News Bureau, April 12)။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အခုလိုချိန်ဆက်စုံစမ်းရင်ဖြင့် ထိုတရားခံပြေးအား အမြန်မိနိုင်မည်ဟု တွေးတောမိခဲ့သေးသည်။ သို့ဖြစ်၍ အောက်ဖော်ပြပါ INTERPOL မှ ပုံ၊အချက်အလက်များအား ၀င်ရောက်လေ့လာမိသည်။
INERPOL ၀ဘ်ဆိုဒ်ပါ အောင်ဝင်းခိုင်ပုံ
“ဤ INTERPOL ၀ဘ်ဆိုဒ်ရှိ အနီရောင် Notice ပြ တရားခံသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအာဏာပိုင် (National Central Bureau) မှ ပေးပို့အကြောင်းကြားလာသည့် အချက်အလက်များအား ကမ္ဘာ့ပြည်သူများသိရှိစေဖို့ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု” ထိုဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထိုပြဌန်းချက်အရဆိုလျှင် ၀ဘ်ဆိုဒ်ပါ အောင်ဝင်းခိုင် ပုံ၊အချက်အလက်သည် မြန်မာအာဏာပိုင်မျာထံမှ ပေးပို့ထားသည့်အတိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူထု၊အာဏာပိုင်များအတွက် အချက်အလက်မျှဝေထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီနေရာမှာ စာဖတ်ပရိတ်သပ်များ သတိချပ်သင့်သည်က ပုံ(၁)-၀ဘ်ဆိုဒ်ပါ အောင်ဝင်းခိုင်ပုံသည် ခန္တာကိုယ် တစ်ဝက် -နောက်ခံ အဆောက်အဦပါ-ခပ်လှမ်းလှမ်း- မျက်နှာအနည်းငယ်စောင်း အနေအထားမျိူး ဖြစ်နေပြီး တစ်ခြားရာဇ၀တ်သားပုံများမှာမူ မျက်နှာကို အရှင်းသားမြင်ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ပုံ(၂)တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း နိုင်ငံအသီသီးရှိ လေယဉ်ကွင်း၊နယ်စပ်ဂိတ် လ၀က မှ မိမိတို့ကောင်တာရှေ့ရောက် ခရီးသွားအား ဓာတ်ပုံရိုက်၊ ပတ်စ်ပို့ scan ဖတ်ပြီး ထိုအချက်အလက်များကို Facial Recognition Technology Software (FRTS) အသုံးပြု၍ INTERPOL မှ ပုံ-အချက်အလက်တို့နှင့် pixel-match လုပ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ပသို့ခရီးသွားဖူးသူတိုင်းကြုံဖူးပါလိမ့်မည်။ လ၀ကကောင်တာများတွင် ခပ်နီးနီးရပ်၍ လ၀ကအရာရှိမှ ခရီးသွား၏မျက်နှာအား clear picture ရိုက်ယူပြီးနောက် ထိုရိုက်ကူးသည့် ပုံ၊ ပတ်စ်ပို့ပါပုံတို့ကို FRTS ပေါ်မှာ run ရင်း ရာဇ၀တ်ပြေး ဟုတ်မဟုတ် screen လုပ်ရစမြဲပါ။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ ပတ်စ်ပို့ပါပုံသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းညီ မရီမပြုံး ဆံပင်မဖုန်းဘဲ မျက်နှာပုံရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်။
သို့သော် Police INTERPOL website မှာဖော်ပြထားတဲ့ အောင်ဝင်းခိုင် ပုံကိုကြည့်လိုက်ရချိန် စိုးရိမ်စရာအချက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အဲဒါက- တစ်ခြားရာဇ၀တ်သားပုံများလို အောင်ဝင်းခိုင်ပုံမှာ မျက်နှာရှင်းရှင်းမြင်ရသည့် အနေအထားမျိူးမဟုတ်သည်ကို သတိထားမိသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍များ အောင်ဝင်းခိုင်တစ်ယောက် အမှန်တကယ် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာဆိုလျှင်ဖြင့် နိုင်ငံခြားလ၀ကမှာ သူ့အားအနီးကပ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Interpol မှ ပုံနှင့် facial match လုပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ match ဖြစ်နိုင်ချေမရှိဘဲ အလွယ်တကူ လွတ်မြောက်သွားနိုင်သည်။ သူ၏ Bio data (အမည်၊မွေးသက္ကရာဇ်၊ပတ်စ်ပို့နံပါတ်) စသည့် INTERPOL ပါ အချက်အလက် များနှင့် match ဖြစ်မှသာ အောင်ဝင်းခိုင်ကို ဖမ်းမိနိုင်ပေမည်။ ဆိုတော့ကာ မိမိအနာဂတ် အေးချမ်းစွာ နေနိုင်ရေး အောင်ဝင်းခိုင်တစ်ယောက် ကြံကောင်းကြံရနိုင်သည်။
မိမိကိုလည်းမမိ၊မိမိ၏နောက်ဆက်တွဲများလည်းလွတ်မြောက်၊အနာဂတ်မှာ ပြစ်မှုစုံကိုရှောင်ပြီးဘ၀ကို အေးချမ်းစွာ မည်သို့ဖြတ်သန်းဖို့ အောင်ဝင်းခိုင်တစ်ယောက် အကြီးမားဆုံးစဉ်းစားပေလိမ့်မည်။ မြန်မာပြည်တွင်း ဆက်လက် အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ ဆိုသည်မှာလည်း အနာဂတ်မှာ လွန်စွာခက်ခဲနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သန်း(၅၀)သောပြည်သူတို့၏ သန်း(၁၀၀)သော မျက်လုံးများက သူ့အတွက် ကြီးမားသော အဟန့်အတားပင်။ အချိန်မရွေး မိမိအားရိတ်မိ၊ဖမ်းမိနိုင်သည်။ အချိန်ှရှည်ကြာသွားသော်လည်း မိမိ၏ရာဇ၀တ်မှုကြီး ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်။ အာဂကိုနေ၀င်းလို စိတ်ဓာတ်ရှိ တာဝန်သိပြည်သူတစ်ယောက်နှင့်သာ လမ်းမှာမတော်တဆ တွေ့လိုက်ရင်ဖြင့် ကွင်းဆက်အားလုံးမီးကိုးကြွက်လျှောက်မိနိုင်သဖြင့် ပြည်တွင်းမှ လက်တစ်လောရှောင်နေ ရန်သည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပေမည်ဟု သူစဉ်းစားခဲ့နိုင်သည်။
နိုင်ငံခြားတွင် Bio data ပြောင်း ခြေရာဖျောက်နိုင်
ဒါဆို နိုင်ငံခြားမှာ ခေတ္တသွားရှောင်တိမ်းမည်လော။ နေပြည်တော်တွင် သူချေရာဖျောက်သွားသည်ဆိုတော့ နေပြည်တော်လေယဉ်ကွင်းမှ ထွက်လျှင် ၁) မြန်မာပြည်လေယဉ်ကွင်းအာဏာပိုင်းများတွင် မှတ်တမ်းရှိရမည်။ သွားနိုင်ချေရှိသည့် destination များမှာလည်း သိပ်မများလှ (နေပြည်တော်-ကူမင်း၊ဘန်ကောက်၊ကွာလာလမ်ပူ….)
တို့သာ။ နယ်စပ်မှထွက်သွားမည်ဆိုလျှင်လည်း (ဘင်္ဂလားဒေရှ်၊အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊ထိုင်း) တို့သာရှိသလို တရားဝင်ထွက်သွားပါက နယ်စပ်အာဏာပိုင်များတွင် မှတ်တမ်းရှိရမည်။ နယ်စပ်မှခိုးထွက်ပြီး နိုင်ငံခြားတွင် ပုန်းအောင်းမည်ဆိုပါက လက်ရှိ Bio data နှင့် ရေရှည်ပုန်းအောင်နေရန်မဖြစ်နိုင်။
ဤနေရာတွင် အရေးကြီးဆုံး နှစ်ချက်က INTERPOL မှ (၁) ဓာတ်ပုံနှင့် (၂) အချက်အလက်များသာ။ သို့သော် INTERPOL မှ သူ၏လက်ရှိဓာတ်ပုံကို သုံးနေသ၍ နိုင်ငံတကာ လ၀က၊ရဲများ ဖမ်းမည့်အခြေအနေက လွတ်မြောက်နိုင်ရန် အလားအလာရှိသည်။ အရေးကြီးသည်က သူ၏ Bio data ကိုပါပြောင်းနိုင်မှသာ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပမှာနေထိုင်စဉ် အနာဂတ်အေးချမ်းမည်ဟု စဉ်းစားနိုင်ချေရှိသည်။
ထိုသို့ဆိုလျင် သူ၏ Bio data (အမည်၊မွေးသက္ကရာဇ်၊…)ကို မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း။ မိမိအားခိုလှုံခွင့်ပေးမည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် မိမိ၏ Bio data အတုဖန်တီး (ဆိုလိုသည်က-အမည်၊မွေးသက္ကရာဇ်..အကုန်ပြောင်းလဲပြီး) ထိုနိုင်ငံတွင်ခိုလှုံ ဘ၀သစ်ကိုစ၊ Residency Status ရ၊အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအကြာ ထိုနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး အောင်ဝင်းခိုင်ဆိုသည့် အမည်နှင့်အတိတ်ကိုမြေမြုပ်၊ ထိုနိုင်ငံသား ပတ်စ်ပို့နှင့် ကမ္ဘာပတ်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြန်လာနေထိုင်သည်ဖြစ်စေ ပြည်တွင်းပြည်ပ မည်သည့်နိုင်ငံကမျှ မိမိအား ဖမ်းမိနိုင်တော့မည် မဟုတ်သည့်အပြင် မိမိ၏တစ်ခြားကြံရာပါများလည်း အမှုမှ ကွင်းဆက်ပြတ်သွားနိုင်မည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ အေးချမ်းသောဘ၀ကို သူဖန်တီးနိုင်မည်ဟု အောင်ဝင်းခိုင်တစ်ယောက် ကြံကောင်းကြံစည်ပေလိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားစရာပဟေဠိ ဖြစ်လာတာက- အထက်ကသုံးသပ်ပြခဲ့သလိုမျိူးသာ အောင်ဝင်းခိုင်မှ သူ၏ Bio data တွေဖြုတ် ဘ၀ကိုဇာတ်မြုတ်ကာ အမည်သစ်လူသစ်အသွင်နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာ ခိုလှုံဖို့ကြိုးစားမည်ဆိုလျှင် မည်သည့်နိုင်ငံမျိူးကို သူသွားပြီးခိုလှုံရန် ကြိုးစားနိုင်မည်နည်း? တပ်မတော်အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် သူ့အတွက် မည်သည့်နိုင်ငံမျိူးက သူ့ကို ခိုလှုံခွင့်ပေးနိုင်မည်နည်း? အကယ်၍ထိုသို့ ခြေရာဖျောက်ရန် ကြံစည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါမူ အနာဂတ်မှာ ရာဇ၀တ်ပြေးအောင်ဝင်းခိုင်ကို တရားဥပဒေအဆုံးအမ ခံယူနိုင်ရန် မည်သို့မည်ပုံ ကြိုးစားကြမည်နည်း? တရားခံဖမ်းမိနိုင်ရေးတွင် အရေးပါသည့် အောင်ဝင်းခိုင်၏ မျက်နှာရှင်းရှင်းလင်းလင်း passport size photo ကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ရဲဌာန၊အေဂျင်စီများသို့ ထပ်မံပေးပို့ထားခြင်းမျိူး သက်ဆိုင်ရာမှ အလျင်မှီဆောင်ရွက်သင့်ပါသလော? စသည်တို့ကို စာဖတ်ပရိတ်သပ်များဆက်လက် စဉ်းစားသုံးသပ်သင့်ပါကြောင်း။။။။။
ဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု သံသယ တရားခံ ဦးဇေယျာဖြိုး ဖမ်းခံရတဲ့ သတင်း ထွက်ပေါ် (Feb 23, 2017)
ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံခံရမှုမှာ ပါဝင်တဲ့ ဇေယျာဖြိုးသည် ယခင် ဗထလ ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးတပ်(ရေကြည်အိုင်) မှ သင်တန်း နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်နေ (Feb 22, 2017)
“ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်နေချိန်မှာ ထိပ်တိုက်မတွေ့ဖို့ အတွက် အများကြီး ဆင်ခြင်ရတာပေါ့” (Feb 21, 2017)
လူတွေကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေချင်တာကြောင့် လေဆိပ်ကို ရွေးချယ်တာလို့ ကောက်ချက်ချနိုင်တယ် (အင်တာဗျူး) (Feb 20, 2017)
Tags: AungWinKhine, INTERPOL, TheinMoeWin, UKoNi